Time စျေး - အွန်လိုင်း TIME ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Time (TIME)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Time (TIME) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Time ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $672 395.00
volume_24h_usd: $374 458.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Time တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Time များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
TimeTIME သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.44TimeTIME သို့ ယူရိုEUR€2.05TimeTIME သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.86TimeTIME သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.22TimeTIME သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr21.9TimeTIME သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.15.31TimeTIME သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč54.07TimeTIME သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł9.08TimeTIME သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.24TimeTIME သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.38TimeTIME သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$54.65TimeTIME သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$18.92TimeTIME သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$13.07TimeTIME သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹182.96TimeTIME သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.411.66TimeTIME သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.34TimeTIME သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.66TimeTIME သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿75.96TimeTIME သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥16.97TimeTIME သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥257.44TimeTIME သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2892.06TimeTIME သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦928.73TimeTIME သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽179.13TimeTIME သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴67.64
TimeTIME သို့ BitcoinBTC0.000206 TimeTIME သို့ EthereumETH0.00616 TimeTIME သို့ LitecoinLTC0.0407 TimeTIME သို့ DigitalCashDASH0.0239 TimeTIME သို့ MoneroXMR0.0261 TimeTIME သို့ NxtNXT173.25 TimeTIME သို့ Ethereum ClassicETC0.34 TimeTIME သို့ DogecoinDOGE678.37 TimeTIME သို့ ZCashZEC0.0245 TimeTIME သို့ BitsharesBTS92.87 TimeTIME သို့ DigiByteDGB89.19 TimeTIME သို့ RippleXRP7.94 TimeTIME သို့ BitcoinDarkBTCD0.0821 TimeTIME သို့ PeerCoinPPC8.4 TimeTIME သို့ CraigsCoinCRAIG1085.23 TimeTIME သို့ BitstakeXBS101.59 TimeTIME သို့ PayCoinXPY41.57 TimeTIME သို့ ProsperCoinPRC298.85 TimeTIME သို့ YbCoinYBC0.00128 TimeTIME သို့ DarkKushDANK763.68 TimeTIME သို့ GiveCoinGIVE5154.87 TimeTIME သို့ KoboCoinKOBO534.61 TimeTIME သို့ DarkTokenDT2.25 TimeTIME သို့ CETUS CoinCETI6873.08
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 18:35:02 +0000.